Heshiiska u Socda Xukuumada Itobiya iyo Jabaha Xoraynta Somali Galbeed, oo ay Dadweynuhu Muujiyeen Taageero Xoog leh. – Rasaasa News
Apr 10, 2010 galbeed, heshiis, Itobiya, Jwxo, Somali
Heshiiska u socda xukuumada Itobiya iyo Jabhada Xoraynta Somali Galbeed, oo eegga uun bilow ah ayaad moodaa in ay dadweynuhu baahi xoog leh u qabeen. Dadweynaha ayaan marna filaynin in ururka Somali galbeed uu siyaasadiisa sidan u furfuri karo, maadaama oo hore loo odhan jiray waa urur diimeed oo ayna talo ka go,i karin, balse ay dabada ka riixayaan dawlado shisheeye.
Heshiiska u dhaxeeya labada dhinac oo ku bilowday xabad joojin iyo in wada hadal dheer la galo, ayaa hada u muuqda mid ka dhakhso badan xiligii loogu talo galay, waxaana sabab u ah deg-degiisa rabitaanka dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Heshiiskan oo u egg mid hirgali doona, ayaa kolka uu dhamaado isbadal ku keenidoona hanaanka siyaasadeed ee ay xukuumada Itobiya kula dhaqanto dhulka Somalida Ogadeeniya. Waxaana abuurmi doona xisbi wayn oo mucaarad ah oo ka qayb qaadandoona fadhiyada baarlamaanka fadaraalka, si la mid ah qoomiyadaha kale ee Itobiya. Mar hadii ay timaado qalin ku looltan aan khatar u keeni karin xukuumada dhexe ee Itobiya, waxaa uu isbadal weyn ku imandoonaa nolosha gabalka Somalida. Waxaa yaraan doonta xadhigii sharci darada ahaa ee dadwaynaha gabalka la iska xidhi jiray iyo wax qabad la,aantii dhinaca horumarinta.
Ururada mucaaradka ah ee qoomiyadaha kale iyaga oo dawlada wax ka sheegaya ayey hadana dalkooda joogaan, in kasta oo marmarka qaarkood kuwo iyaga ka mid ah la xidho. Fadhiyada Baarlamaanka federaalka ayey ku dhaleeceeyaan xukuumada iyaga oo u doodaya xaqa ummadooda.
Nabad galiyo uu helo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa waxay uu ku xidhnaandoontaa, sida ay dawlada Itobiya u hirgaliso heshiiska la dhawrayo in ay wada gaadhaan Jabhada Somali galbeed iyo xukuumadu. Waxaa iyana muhiim ah oo guusha heshiiska la filayaa ay ku xidhnaandoonta sida ay Jabhada Somali galbeed u soo jiidato ururada kale ee gabalka u dhashay ee iyaguna dagaalka kula jira xukuumada Itobiya.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa iyadu durba horortay heshiiska nabadeed ee ay ku baaqeen Jabahada Somali galbeed iyo xukuumada Itobiya. Dhinaca kale waxaan iyagu wali ka hadlin oo aan iyagu mawqifkooda ku aadan heshiiskan hordhaca ah cadynin golaha sare Jwxo.
Isku soo duub oo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayey ka muuqataa in ay baahi wayn u qabaan nabad galiyo ay helaan, waxaana hubaal ah in ay garab istaagayaan cidii nabad ugu baaqda, waxayna cadow u arkayaan cidii colaad ugu baaqda.
Ethiopia opposition leader flees 12-year jail term